Yamaha YZF-R125 Bike – Prices, reviews, ဓာတ်ပုံများ, မိုင်အကွာအဝေး, အင်္ဂါရပ်များ & Specificat… | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (36790)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6454)
Home → Yamaha → Yamaha YZF-R125 Bike - စျေးနှုန်းများ, reviews, ဓာတ်ပုံများ, မိုင်အကွာအဝေး, Features & Specificat...
Yamaha YZF-R125 ဆိုင်ကယ် – စျေးနှုန်းများ, reviews, ဓာတ်ပုံများ, မိုင်အကွာအဝေး, အင်္ဂါရပ်များ & သတ်မှတ်ထားသော…
18 ဇွန် 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် Yamaha YZF-R125 ဆိုင်ကယ် – စျေးနှုန်းများ, reviews, ဓာတ်ပုံများ, မိုင်အကွာအဝေး, အင်္ဂါရပ်များ & သတ်မှတ်ထားသော…
This bike is designed by the same engineers of R1 and R6 super bikes. အဆိုပါ 2009 Yamaha YZF-R125 is charged with the race spirit and power. Worn in the seductive paint and colors enhanced by the rich graphics, it is definitelyacut above the rest in its categories with the aggressive look and styling cribbed from R1 and R6.
Yamaha YZF-R 125 boasts of the all new liquid-cooled, 4-လေဖြတ်ခြင်း, 4-အခင်အရှင်, တစ်ခုတည်းဆလင်ဒါ, SOHC 124.66cc engine. Now it can generate more torque enhanced by the longer stroke. The engine isa52mm bore and 58.6mm stroke with an impressive 11.2:1 ချုံ့အချိုးအစား. The free-revving, liquid-cooled 4-stroke engine is fuel injected for near-instant throttle response, whilea6-speed gearbox regulates the power ban.
Yamaha YZF-R125 ဓာတ်ပုံများ
2012 Yamaha Stratoliner Deluxe, Yamaha Stratoliner Deluxe Review, နယူး…
2004 Yamaha WR250F – WR450F – ဖုန် Rider မဂ္ဂဇင်း
Yamaha စူပါ Tenere Worldcrosser – အဆုံးဖြစ်သော ...
အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဆူဇူကီး AN 650 Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး Colleda CO Bajaj Discover Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Ducati 60 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Brammo Enertia ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Ducati Desmosedici GP11 Ducati Diavel Aprilia Mana 850 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ DN-01 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက်